Ireo Mpilatsaka An-tsitrapo Mitantara An-tsoratra Sy An-tsariitatra, Ny Fiainan’ireo Kolombiana Mpikatroka Novoina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2018 4:51 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, عربي, Ελληνικά, русский, polski, English
Ny Postales para Memoria dia tetikasa iray tantanan'ireo mpilatsaka antsitrapo. Hoe ny tenifototra hoe: Novoin'izy ireo izahay. Fampiasàna nahazoana alalàna.
Miaina herisetra goavana i Kolombia nanomboka tamin'ny nanasoniavan'ny Filoham-pirenena José Manuel Santos ny fanekena fandriampahalemana ara-tantara iray niaraka tamin'ireo Tafika Revolisionera ao Kolombia (FARC), olona iray isaky ny efatra andro no maty nisy namono hatramin'ny taona 2016.
Nandritra ny fampitsaharana an'ireo FARC tany ambanivohitra, nisokatra ihany koa ireo andiany hafa – ahitàna ireo mpiady anaty akata, ireo mpandimby ny andian-tafika ankavanana sy ireo avy amin'ny FARC ihany – mba hiady ho an'ny fifehezana an'ireo tany nilaozana. Teo amin'ny anjarany, tafiditra tao anelanelan'ny laona sy fanoto ireo mpitarika sy ireo mpikatroka avy amin'ny vondrom-piarahamonina, ary nitarazoka be ny famahàna olana naaon'ny governemanta.
Raha toa ka nandamoka ireo vahaolana natolotry ny governemanta, ireo mpikatroka kosa nametraka tamin'ny toerany ireo finiavana mba hitandroana ny fahatsiarovana an'ireo niharan-doza. Anisan'ireny ny “Postales para la memoria” (Postcards for Memory), tetikasa iray ifandrimbonana izay nandrafetan'ireo artista mpanao sary sy ireo mpanoratra antsitrapo ny tantaram-piainana fohy mikasika an'ireo mpikatroka nisy namono.
Ho an'ireo mpamorona ny tetikasa, very tao anaty vontoatin'ny fandrakofana mediatika mikasika ny zotran'ny fandriampahalemana no niafaràn'ny tantaran'ireo niharan-doza. Hoy ilay vohikala hoe:
Fomba iray matanjaka ny karatra postaly, afaka mandraikitra ny tena anton-javatra amin'ny tantara tsirairay ary mandefa an'io hafatra io manerantany ara-nomerika na amin'ny endrika mivaingana, manome antsika ny fahafahana mandray anjara, mampita ary mitantara amin'izao tontolo izao momba ireo mpitondra antsika.
Tsy misy traikefa arakasa takiana- afaka manomboka avokoa ny olona rehetra te-handray anjara, amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny imailaka sy amin'ny fanolorana hevitra hanoratra tantara iray na manao ny sarin'ny iray amin'ireo mpitarika.
Ireo mpiaro ny zon'olombelona, ireo mpanabe, ireo mpiaro ny tontolo iainana
Mpitarika vondrom-piarahamonina ao Cali, ao Valle de Cauca i Sandra Viviana Cuéllar. Miaro an'ireo harena ara-boa-janahary avy amin'ireo tany an'ny vondrom-piarahamoniny tsy ho ravan'ny indostria fanaovana menaka voanio izy, . Nisy namono izy tamin'ny 2011, teo amin'ny faha-26 taonany. Ity ny karatra postaly ahitana azy:
Karatra postaly misy an'i Sandra Viviana Cuéllar. Sary nataon'i Ana Maria Lagos Gallego. Fampiasàna nahazoana alalàna.
Niaina izy ary nijaly ho an'ny mananaina rehetra: ny zavamaniry, ny biby tsisy mpiahy […] Nahasarika ahy ny fahafahany manentana, manetsiketsika, miresaka amin'ireo hafa amin'ny fomba tsotra sy miramirana. […] Indray Alakamisy tokony ho tamin'ny mitatao vovonana no maty i Sandra, tao amin'ny faritra iray antsoina hoe El Terminalito. Teny an-dàlany ho any Palmira izy mba hanolotra ny fampianarany voalohany momba ny fambolena sy ny tontolo iainana tao amin'ny Anjerimanontolo Nasionaly. Pataloha ‘jean’ manga no nanaovany sy ambonin'ankanjo mainty. Roa andro taty aoriana, hita tsy nisy nanombinana avokoa ny finday sy ny kitapony teo amin'ny toerana fiantsonan'ny fiara fitaterana. Io no hany vaovao tokana fantatr'izy ireo mikasika azy.
Nonina tao an-tananàn'i Pueblo Rico i Yolanda Maturana, ao amin'ny departemantan'i Risaralda. Izy no namorona ny Fikambanana mikasika ny tontolo iainana “Asociación de Amigos de la Fauna y La Flora” (Fikambanan'ireo Naman'ny biby sy ny Zavamaniry). Novonoina tao an-tranony izy tamin'ny febroary 2018, teo amin'ny faha 59 taonany.
Ny niavaka tamin'i Yolanda dia ny fahasahiranany mitandro ny faharetan'ireo loharanon-karena izay mamelona ny vondrom-piarahamonina misy azy. Izay no antony nanohanany ny fanaovana ho ara-dalàna ny fihazàna ho fivelomana eo amin'ny tany iombonana ao Santa Cecilla.
Karatra postaly misy an'i Yolanda Maturana. Sary nataon'i Catalina Uribe ary nampiasaina nahazoana alalàna.
Marobe ireo karatra postaly mikasika an'ireo zanatany mpitarika, mpanabe, mpikatroka miady amin'ireo vanja alevina, ary ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona.
Liliana Astrid Martínez Ramírez, mpanabe sady reny niteraka roa. Sary nataon'i Helena Melo. Fampiasàna nahazoana alalàna.
Eliécer Carvajal, mpisolovava nandray anjara tamin'ny fankatoavana ny fandriampahalemana tao amin'ny distrika nisy azy. Sary nataon'i Juandacoco. Fampiasàna nahazoana alalàna.
Betsaka ireo tantara hafa toy ny an'i Liliana's sy Eliécer, izay hita etsy ambony ireo karatra postaly momba azy ireo, no miandry izay mpirotsaka antsitrapo htantara azy manokana, tahaka ireo tantara hafa miandry izay mpandrafitra an-tsary azy manokana koa.